तपाईं को आजको राशीफल (बुधबार) – तपाईं सबै को दिन शुभ र मंगलमय रहोस -
२०७५, ११ पुष बुधबार ०१:१६ December 26, 2018 clickonLeaveaComment on तपाईं को आजको राशीफल (बुधबार) – तपाईं सबै को दिन शुभ र मंगलमय रहोस
मित्रबाट गरिएको एउटा विशेष प्रशंसा तपाईंका आनन्दको स्रोत हुनेछ। यसको कारण के हो भने तपाईंले ती जीवनजस्ता रूखहरू खडा गर्नुभएको छ जसले अरूलाई छाया दिन आफु खडा भएर प्रचण्ड गर्मी सहन गर्दछन्। आफ्नो खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धिले तपाईंको मनमा शान्ति हुनेछैन। परिवारका सदस्य वा जोडीले केही खिचलो निकाल्नेछन्। तपाईंका मुस्कानको कुनै अर्थ छैन – तपाईंका हास्यको कुनै आवाज छैन – तपाईंलाई सामिप्य नहुनाले मुटुले धडकन बिर्सन्छ – विशेष गरेर तपाईंले कुराहरू कुटनैतिक तरीकाले सामना गर्नु भएन भने कार्यस्थलमा तपाईंको लागि नयाँ समस्या आइपर्ने छन्। आजको दिन तपाईंलाई कस्तो लाग्यो भन्ने कुरा अरूलाई बुझाउन उत्सुक नहुनुहोस्। तपाईंको कार्य व्यस्तताको कारणले तपाईंको जोडीले तपाईंको इमानदारी प्रति शङ्का गर्न सक्छ, तर दिनको अन्त्यमा उनले कुरा बुझेर तपाईंले अंगाल्ने छन्।
समग्र स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ तर यात्रा व्यस्त र तनाउपूर्ण साबित हुनेछ। ब्याङ्कका कामहरूमा धेरै ध्यान दिनु आवश्यक छ। भेटघाट गर्ने अतिथिहरूले सांझ बिताउनेछन्। तपाईंलाई आफ्नो जोडीलाई आफ्नो स्थिति बुझाउने प्रयास गर्दा कठिनाई हुनेछ। तपाईंको नयाँ योजना र उद्यमको बारेमा भागीदारहरू उत्साहित हुनेछन्। आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। एउटा व्यक्तिले आज तपाईंको जोडीको धेरै चासो लिन सक्छ, तर केही नराम्रो भएको छैन भन्ने तपाईंलाई दिनको अन्तमा महसुस हुनेछ।
तपाईंको धेरै भरोसा र सजिलो काम गर्ने समयले तपाईंलाई आज आराम गर्नको लागि पर्याप्त समय दिएको छ। यो एउटा अर्को धेरै ऊर्जा प्रदान गर्ने दिन हो र अनपेक्षित लाभ हुने सम्भावना छ। आफ्नो ठूलो पार्टी सबैलाई लिनुहोस् – आज तपाईंसँग आफ्नो समूहको लागि कार्यक्रम संगठित गर्ने ऊर्जाको अतिरिक्त मात्रा हुनेछ। आज, तपाईंलाई आफ्नो प्रेमीले तपाईंलाई सधैं प्रेम गर्नेछ भन्ने थाहा लाग्नेछ। तपाईंले कुनै पनि महँगो उद्यमको लागि साइन अप गर्नु अघि आफ्नो निर्णयको प्रयोग गर्नुहोस्। आफ्नो तालिकामा अन्तिम मिनेटको परिवर्तनहरूको कारणले तपाईंका यात्रा योजनाहरू सर्न सक्छन्। तपाईं वरिपरि मानिसहरूले तपाईंको सम्बन्धमा मतभेद सिर्जना गर्न प्रयास गर्ने धेरै सम्भावना छ। बाहिरी मान्छको सल्लाह अनुसार केही नगर्नुहोस्।
जीवनलाई लिएर एउटा उदार मनोवृत्ति बनाउनुहोस्। आफ्नो बाँच्ने अवस्थालाई लिएर उजुरी गर्ने र दुखी हुने कुनै काम छैन। यो जीवनको सुगन्ध नष्ट गर्ने र शान्त जीवन बाँच्ने आशाको हत्या गर्ने नीच सोचाइ हो। लामो समयदेखि रोकिएको अवशिष्ट र बकाया अन्तमा बरामद गरिनेछ। आज काम तनाउपूर्ण र गल्ने हुनेछ – तर मित्रहरूसँग हुनाले तपाईंलाई खुशी र तनाउमुक्त मुडमा राख्नेछ। रोमान्सको लागि धेरै राम्रो दिन होइन किनकि तपाईंले साँचो प्रेम पाउन सक्नु हुनेछैन। तपाईंले जे गरे पनि सिद्ध हुनुहुनेछ – तपाईंले आफ्ना वरिपरिका मानिसहरूलाई आफु कति कुशल हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण दिनुहोस्। सेमिनार र प्रदर्शनीहरूले तपाईंलाई नयाँ ज्ञान र सम्पर्क प्रदान गर्नेछ। तपाईंको यो एउटा रमाइलो रोमान्टिक दिन हुन सक्छ, तर केही स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्छन्।
धेरै चिन्ता र तनाउले तपाईंको स्वास्थ्य बिगार्न सक्छ। तपाईंले मानसिक स्पष्टता कायम गर्न भ्रम र निराशा त्याग गर्नु पर्नेछ। आर्थिक सुधार भएमा तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण खरीद गर्नको लागि सुविधा हुनेछ। मित्र र नजिकैका व्यक्तिहरूले तपाईंलाई सहयोग गर्नेछन्। सामाजिक बाधाबाट छुटकारा पाउन असमर्थ। कुनै पनि नयाँ संयुक्त उद्यम र साझेदारीमा हस्ताक्षर गर्नबाट बच्नुहोस्। यात्रा गर्ने मौका खोज्नु पर्नेछ। आफ्नो जोडीले आज तपाईंको प्रतिष्ठामा केही धेरै असर गर्न सक्छन्।
आफ्नो परिवारसँग समय बिताएर अलग भएको र एक्लोपनको भावनाबाट छुटकारा प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईं यात्रा र पैसा खर्च गर्ने मुडमा हुनुहुनेछ – तर त्यसो गर्नुभयो भने तपाईं पछुताउनु हुनेछ। कुनै मानिसहरू आफुले गर्न सक्ने भन्दा बढी प्रतिज्ञा गर्छन – कुरा मात्रै गर्ने र कुनै परिणाम नदिने मानिसहरूलाई बिर्सिनुहोस्। प्रेम वसन्त जस्तै हुन्छ; फूल, हावा, घाम, पुतलीहरु। तपाईंले आज रोमान्टिक कुतकुती महसुस गर्नु हुनेछ। अझै पनि कामको खिचलोले तपाईंको मन बेह्रेको छ र परिवार र साथीहरूको लागि कुनै पनि समय निस्किन सकेको छैन। परमेश्वरले आफूलाई मद्दत गर्नेहरूलाई मद्दत गर्दछन् भन्ने तपाईं याद हुनु आवश्यक छ। आज तपाईंले आफ्नो जोडीसित साँच्चै नै रोमाञ्चक केही गर्नु हुनेछ।
तपाईंको लागि आज राम्रो ऊर्जा प्रदान गर्ने दिन होइन र तपाईं सानो विषयमा रिसाउन सक्नुहुनेछ। बुद्धिमानीपूर्वक लगानी गर्नुहोस्। परिवारका सदस्यहरूले तपाईंका दृष्टिकोणको समर्थन गर्नेछन्। तपाईंका जोडीको स्वास्थ्य नराम्रो हुनाले आज प्रेममा बाधा पर्नेछ। काम गर्ने आफ्नो वरिष्ठ आज स्वर्गदूतहरूको अभिनय गरेको जस्तो देखिन्छ। आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ। तपाईंले आज आफ्नो वैवाहिक जीवनका एउटा कठिन समयको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
धेर नखानुहोस् र तन्दुरूस्त हुनको लागि नियमित रूपमा स्वास्थ्य क्लब जानुहोस्। त्यसै बसिरहनु भन्दा पैसा कमिने केहीमा किन संलग्न हुनुहुँदैन – यसले तपाईंको कमाउने शक्तिमा सुधार हुनेछ। तपाईंले आफ्ना छोराछोरीबाट केही सिक्नु हुनेछ। तिनीहरूमा धेरै शुद्ध प्रभामण्डल छ र आफ्नो निर्दोष हर्ष र नकारात्मकताको अभावको कारण तिनीहरूले वरिपरि परिवर्तन गर्न सक्छन्। अचानक आएको रूमानी हावाले तपाईंको आत्मालाई उँभो उठाउनेछ। तपाईंले नयाँ व्यापार साझेदारीको विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने – त्यसपछि तपाईंले कुनै पनि प्रतिबद्धता गर्नु अघि हातमा सबै तथ्य प्राप्त गर्नु आवश्यक हुनेछ। आज मान्छेहरूले तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन् – जुन तपाईंले सधैं सुन्न चाहनु हुन्थ्यो। तपाईंलाई पाएर तपाईंको जोडी आफैंलाई भाग्यमानी मान्छ जस्तो लाग्छ। आज यस क्षणको राम्रो उपयोग गर्नुहोस्।
तपाईंको शारीरिक रोग आराम हुने धेरै सम्भावना भएकोले खेल प्रतियोगितामा भाग लिन सक्षम हुनु हुनेछ। तपाईंलाई आकर्षित गर्ने लगानीको योजना बारे थप पत्ता लगाउन धेरै कुरा जान्नुहोस् – कुनै पनि निर्णय लिनु अघि आफ्ना विशेषज्ञहरुसँग परामर्श गर्नुहोस्। परिवार समस्याग्रस्त हुन सक्छ। तपाईंको पारिवारिक जिम्मेवारीको लापरवाहीले उनीहरूको क्रोध निम्त्याउन सक्छ। तपाईं पहिलो नजरमा प्रेममा पर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुराहरू नपढीकन कुनै पनि व्यापार / कानुनी कागजातमा हस्ताक्षर नगर्नुहोस्। व्यापारको उद्देश्यको लागि गरिएको यात्रा लामो समयपछि लाभदायी साबित हुनेछ। तपाईंलाई आज विवाहको साँचो परमानन्द थाहा हुनेछ।
आफ्नी पत्नीसँग पारिवारिक समस्या साझेदारी गर्नुहोस्। मायालु र एकअर्काको पोषण गर्ने दम्पतीको रूपमा आफूलाई पुन स्थापित गर्न र पुन: पत्ता लगाउन एकअर्काप्रति केही समय बिताउनुहोस्। तपाईंका छोराछोरीले पनि घरमा सुख र शान्ति सद्भावको तरङ्ग महसुस गर्न सकुन्। यसले तपाईंहरू दुवैलाई आफ्नो बातचीत ऐच्छिक रूपमा र स्वतन्त्रतासँग गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। मनोरञ्जन वा कस्मेटिक सुधारमा पनि धेरै खर्च नगर्नुहोस्। तपाईंले समयमा गरेको मद्दतले कसैको जीवन बचाउन सक्छ। समाचारले तपाईँको परिवारका सदस्यहरूलाई गर्व हुने र तिनीहरूलाई प्रेरित पनि गर्नेछ। कार्डमा एकजना रोचक व्यक्तिसँग भेट हुने सम्भावना देखिन्छ। नयाँ कुरा सिक्ने तपाईंको प्रतिभा उल्लेखनीय हुनेछ। आफ्नो प्रतिष्ठामा हानि गराउने मान्छेसँगको सङ्गत गर्न रोक्नुहोस्। तपाईंको जोडी आज ऊर्जा र प्रेमले भरिएको हुनेछ।
तपाईंको लागि धेरै खुशी र आनन्द – किनभने तपाईंले जीवनको पूरा आनन्द उठाउने तय भइसकेको छ। तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। अनपेक्षित सुसमाचारले तपाईंको हौसला बढाउनेछ। आफ्नो परिवारका सदस्यहरूसँग समाचार सुनाउनाले उनीहरू पनि खुशी हुनेछन्। तपाईंले आज प्रेम गर्ने मौका गुमाउनु भएन भने, आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा कहिल्यै तपाईंले यो दिन बिर्सन सक्नु हुनेछैन। आज तपाईंलाई काममा राम्रो समाचार प्राप्त हुन सक्छ। आफ्नो तालिकामा अन्तिम मिनेटको परिवर्तनहरूको कारणले तपाईंका यात्रा योजनाहरू सर्न सक्छन्। आज जीवन साँच्चै सुन्दर हुन गइरहको छ, किनभने तपाईंको जोडीले कही विशेष कुराको योजना गरेको छ।
एउटा लाभदायी दिन हो र तपाईं दीर्घ रोगबाट राहत पाउन सक्षम हुन सक्नुहुनेछ। आर्थिक समस्याले तपाईंको निर्माणात्मक सोच्ने क्षमतामा हानि पुर्याउनेछ। तपाईंको काममा दबाव कम हुने र परिवारका सदस्यहरूसँग समय काट्ने उचित दिन। रोमान्टिक मुडमा अचानक परिवर्तन हुनाले तपाईंलाई धेरै नराम्रो लाग्न सक्छ। महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग बातचीत गर्दा आफ्ना कान र आँखा खुल्ला राख्नुहोस् – किनकि तपाईंले एउटा मूल्यवान टिप पाउन सक्नुहुन्छ। सामाजिक साथै धार्मिक कार्यको लागि उत्कृष्ट दिन। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्य केही खराब हुन सक्छ।
कमेडियन कपिल शर्मा को बिबाह का लागी अमिताभ बच्चन ले गरेको बाचा पुरा गरेनन, किन होला??
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिले आत्मघाती बम पड्काउने चेतावनी दिएका छन् (भिडिओ मा हेर्नुहोस)
२०७५, ७ मंसिर शुक्रबार २०:११ November 23, 2018 clickon
नेता–कार्यकर्ताहरुको आपसी झगडा र एकले अर्कोलाई हराउने खेलले नै चुनावमा कांग्रेसले हार व्यहोरेको – शेरबहादुर देउवा
२०७५, २३ कार्तिक शुक्रबार ०२:३६ November 9, 2018 clickon
ल हेर्नुहोस् केही रोचक जानकारी हरु !!! के तपाईं लाई थाहा छ?
२०७५, २६ जेष्ठ शनिबार ०२:२२ June 9, 2018 clickon